Hurumende Inowedzera Mihoro yeVashandi Vayo
Chikunguru 01, 2011
Hurumende inonzi yazivisa neChishanu kuti yawaedzera mari dzinotambirwa nevandi vayo kutanga mwedzu uno waChikunguru. Mari iyi inonzi yawedzerwa nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kusvika makumi mashanu kubva muzana.
Hurumende inonziwo yavimbisa zvakare kuti mari idzi dzichawedzerwa zvakare muna Ndira gore rinouya.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nehurumende we Joint Negotiating Council, sachigharo wemasangano evashandi vehurumende kana kuti Apex Council, Amai Tendai Chikowore, vati mushandi wepasi pasi muhurumende anenge ave kutambira mari inotangira pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu nematatu. Mari iyi inosanganisirawo mari dzekubatsirikana nezvimwe.
Pari zvino mushandi wepasi pasi muhurumende anotambira madhora zana nemakumi maviri nemasere pamwedzi.
Amai Chikowore vatiwo hurumende yabvuma kupa vashandi vanoshandira kumaruwa mari dzekubatsirikana kana kuti rural allowance, pamwe nemari yedzidzo. Asi vati mari idzi dzichatanga kubhadharwa kana hurumende yave nemari.
Munyori weApex Council, vari zvakare sachigaro wePublic Service Association, Amai Cecil Alexander, vatenda zvaitwa nehurumende vachiti zvicharerutsa hupenyu hwevashandi vehurumende.
Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaRaymond Majongwe, vashora mari yapihwa vashandi vehurumende vachiti ishomanana pane iyo vange vakatarisira.
VaMajongwe vashorawo mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende nekutambira mari shomanana yaziviswa nehurumende.
Asi vemamwe masangano aya vashorawo kuita kwaVaMajongwe vachiti hapana chavari kupengera nekuti sangano ravo range riri mumusangano wabvumirana mari itsva dzichange dzave kutambiriswa vashandi vehurumende.
Sangano raVaMajongwe, iro rine nhengo dziri kuramwa mabasa, rati richanzwa kunhengo dzaro kuti rotora danho ripi.
Sangano reCollege Lecturers’ Association of Zimbabwe ratiwo harina mufaro nemari dzapihwa nehurumende.
Vashandi vehurumende vanga vachiti vanoda kutambiriswa mari iri pamusoro pemari inoita kuti munhu ararame zviri nani kana kuti poverty datum line iyo yave pamadhora mazana mashanu nemaviri pamwedzi.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi, VaRejoice Ngwenya, vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kubhadhara mari yayawedzera vashandi vayo nokuti haina mari yacho.﻿